Sei tichida Kuda Vinyl Fencing Uye iwe unofanira Too - bestpvcfence.com
Products PVC fence Privacy fence Vinyl fence Picket fence Lattice Fence
Masvingo anobayirwa mune zvinhu zvakawanda, kunyange zvakadaro vinyl fencing inowanzoenderana nekukwanisa kwayo uye kuchinja. kunze kwekunzwisisa, masvingo aya ari nyore kwazvo kutarisira uye haazoputsika nekuda kwemazuva masikati kana nguva. Vinyl fencing iye zvino yakagadzirirwa kuva shanduko yakanaka yematanda emiti uye ndeye kwenguva yakareba kwenguva refu. Pakutanga, iwe unogona kufungidzira kuti vinyl ...
Masvingo anobayirwa mune zvinhu zvakawanda, kunyange zvakadaro vinyl fencing inowanzoenderana nekukwanisa kwayo uye kuchinja. kunze kwekunzwisisa, masvingo aya ari nyore kwazvo kutarisira uye haazoputsika nekuda kwemazuva masikati kana nguva. Vinyl fencing iye zvino yakagadzirirwa kuva shanduko yakanaka yematanda emiti uye ndeye kwenguva yakareba kwenguva refu.
Pakutanga, iwe unogona kufungidzira kuti vinyl haisi yakanaka yekuvhara, asi, chaizvoizvo, inonyanya kushandiswa kune mamwe maitiro ekudzivirira masvingo mazuva ano. iwe uchave wakawedzerawo kuona kuti imwe yenzvimbo dzakanakisisa dzakanaka uye dzakanyanyisa munzvimbo yako showcase trendy uye yakaisvonaka vinyl fences.
Kana iwe usingafari nemambo wechiparadhi chako, funga kuisa muvhenisi fence nezvose zvinobatsira zvavanopa.
Vinyl inogona kuva chinhu chakasimba kwazvo uye yakagadzirira kurwisa mamiriro ekunze zvakanyanya semhepo ine simba uye kuora kukuru. Iyo inowedzera ine simba rekudzivisa kusvibiswa kunyura nemvura yemunyu, iyo inodzivirira iyo kuti irege kuputswa. Imwe inoshandiswa zvakanyanya yeiyo rudzi rwekudzivirira ndeyokuti haina kuvhara mvura uye naizvozvo, haizogadziri kana kupisa. Vinyl fencing ingangodaro yakajairika kuchengetedza mhuka mukati mazvo zvisingakwanisi kuidzidzira. Zvisinei, nehuni, kune mukana wekuti mhuka dzingangodedera.
Vinyl inogona kushandiswa kumusangano wechipungamire nokuti haina kuora kana kuora. iwe unowedzera haufaniri kunetseka pamusoro pekukuvadza kunokonzerwa nemvura, munyu, rudu, termites, kana zvipembenene. iyi 5 nguva yakasimba uye yakawedzerwa yakasimba yakaenzaniswa nesimbi kana kuti sango rehuni. Nokudaro, iwe uchakwanisa kungoisa pedyo pedo nemichina yekugadzirisa kana kushambaira asi usingafungi kuti ichakurumidza kana kupisa.
Sezvakataurwa pamusoro, vinyl haigoni kunyorova uye ichi chinoita kuti chive chinhu chakanaka chekuvhara. Hazvifanirwi kugadziriswa semugumisiro wepende harizoiti kana kupera pairi. kuti ugare wakachengetedzwa zvakanaka, zvose zvaunofanira kuedza uye uite ndezvokushamba nevharagi kana sese nemvura uye inotanga kupenya. Iwe hauzombodi kutora chekutanga kuti uuchengetedze kubva kumarara uye yakanyoroveswa nokuti haigoni kunyora unyoro uye hairi kuora. Wood inobatanidza mukana wekuputswa nemazuva uye naizvozvo, unofanirwa kutarisirwa nekushungurudzwa kwemishonga. Saizvozvowo, simbi inotanga kukisikidzika pasina nguva uye inoda kugadzirisa kwakanaka zvakare. Zvisinei, vinyl fencing haadi iko kugadziriswa.
Vinyl inonzwisisika uye inodhura kudarika huni kana simbi. Sezvo kusina kugadziriswa kuchidiwa, haufaniri kubhadhara mari yakawanda pamusoro payo kuitira kuti iite seyakanaka uye itsva. Kune rumwe rutivi, pamwe nesimbi kana kuti masango ekudzivirira, iwe ungafanirwa kuichengeta nguva dzose mugore rinopfuura gore uye izvi zvingakukoshesa iwe mujenya. Vinyl fence inogona kuchengetedza kukosha kwako kwekuchengetedza sezvausingazofaniri kudzorera kana kuidzosera uye kuichengetedza kubva kumvura, unyoro, kana nguva.
Vinyl fence iri nyore kwazvo kuisa. Mukati, iwe uchakwanisa kuita zvose iwe pachako. Zvose zvaunofunga kuti uzviite ndezvokuisa zvigaro mukati mevhu zvakasimba uye slide uye kuvhara rairi pairi. vazhinji veimba vanofarira kuisa mujeri iri pachavo semugumisiro wezvavanoda kudzivisa kuparadza mitengo yebasa. pasinei nokuti iwe unosarudza kuda kutungamirirwa kubva kune unyanzvi, haazokupikidzi mijenya semugumisiro wezvenzira yakakwana iri nyore kwazvo. Izvo zvinotyisa ndezvokuti mutengo wekutenga} nekuisa muvinyl kuvhara ishoma kudarika kunotenga huni kana simbi yekudzivirira oga.
Vinyl fence inonyanya kushandiswa nekuti inowanikwa mune dzakawanda dzakanaka uye dzinoyemura aesthetics. iwe uchakwanisa kuona maitiro akasiyana edzimba semasvingo akavhara, masvingo ehupfumi, masvingo e-post-na-rail, uye masvingo ekushongedza. hazvina mhosva kuti zvaunoda ndezvipi, iwe unogona kunyatsocherechedza imwe inofamba zvakanaka nemamiriro eimba yako. Zvizhinji zvevinyl fences zvinowanikwa mumumvuri wakawanda wepachena uye tani, zvisinei kana iwe unofarira pakugadzira huni, uchakwanisa kunyange kutarisa vinyl fencing inofanana nekunzwa uye ruvara rwehuni. Aya mazhenje anopiwa mune zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvemavara, maumbirwo, mavara, uye zviyero kuitira kuti iwe ugozokwanisa kusarudza iyo inokusvitsa iwe wekutanga.
Kusiyana nedare kana aluminium fence, vinyl fencing inopa huwandu hwakazara. Simbi uye aluminiyumu fence haina mhando imwe yemhando yakapiwa uye kazhinji ine nzvimbo dzakawanda mavari. Kune rumwe rutivi, vinyl fences inowanikwa mune imwe yemhando yemhando uye inofanirwa kushandiswa pakusungirirwa pakavha kudzivirira dzimba, kumashure, uye kumativi ekudzivirira rusvingo. Aya masvingo anobayirwa munzvimbo dzakakwirira uye anogona kungovanza chigadziko kuti ave nechokwadi chekuchengeteka uye yega.
Vinyl fencing inowedzera kuchengeteka kumhepo uye haisi chepfu. izvi zvinogona kunge semugumisiro weyo hazvisi zvekugadzira zvakagadzirwa uye kubata zvekushungurudzwa zvinokanganisa uye zvinokonzera mishonga. inowedzerazve kushandiswa, saka hapana kushayiwa kunofungidzirwa panguva iyi yekudzivirira. Vinyl inoumbwa nemahydrocarboni uye nhamba yeatomic 17 uye inogadzirwa nezvinhu zvakasikwa izvo zvisingaoneki zvisina ngozi kuvanhu vanogara varipo. Zvizhinji zvezvinhu zvakashandiswa zvakare uye zvisikwa zvepanyika zviri muAmerica, saka iyi inhare inonzwisisa uye yakachengeteka kumhepo.
Zvizhinji zvevinyl fences zvinopiwa nehupenyu hwehupenyu hunovimbiswa. Ichi chinoita kuti musha -dzidzi ave nechokwadi uye anofara asi achiitambudza. Nokudaro, kana feni inotarisana nemhepo ine simba uye kuputsika uye inoputsika, iwe uchakwanisa kungoigadziridza kana kugadziriswa. simbisai kuti vinyl fence yauri kushanyira inobva kune kambani yakanaka inopa hupenyu hwehupenyu huripo pamusoro payo. Nekusimbiswa kweupenyu, iwe unogona kuona kuti iwe wekutsvaga kwako wakachengeteka uye wakachengetedzwa kwezvasara zvehupenyu hwahwo. Nekudzivirira uku, iwe unogona kuva nerugare rwepfungwa kuti iwe uchangoti watsiviwa naro kana ichinge yaputswa.
Mitauro yeVinyl Fences
Vinyl fence inowanikwa mumhando dzakasiyana-siyana dzakasiyana-siyana sezvinotaurwa pamusoro, asi zvakanyanya kufanana ndezvekudzivirira hupfumi, masvingo ekutengesa, uye vanhu vane mumvuri bhokisi. iyo inotevera ndeye michina yakawanda yekudzivirira iyi:
Nzvimbo yekuchengetedza rusvingo ndeyokuti yakanyanya kufanirwa rudzi rwevinyl fence uye inowanzojaira kuchengetedza minda kana patios kuchengeteka uye yakavanzika kubva kune vamwe. Aya masvingo akaumbwa nesimbi imwechete shamwari dzinoshandiswa dzakanaka kuti dzigone kushandiswa senzvimbo yakavhara yezvikepe zvekugezera uye nzvimbo dzakasiyana dzevanhu kuti dzidzwe kuverengwa kwevanhu vanopfuura. Nzvimbo yekuchengetedza rusvingo ichadzivisa zvachose kuverengwa, uye hazvibviri kune vanhu vari pane chimwe chikamu chakasiyana kuti vanzwisise zviri kuitika shure kwavo. Aya masvingo akaumbwa nemitauro yakanyonganiswa yakabatanidzwa zvakasimba pamwe nemapuketeni e-groove kuti igadzire chigamba chakasimba uye chinogara kwenguva refu.
Yose feni inoratidzika sechikamu chimwe chete, zvisinei, iyo yakawanda pane mapapiro akasiyana akabatanidzwa pamwe chete nechitarisiko ichocho sekuti iri chinhu chimwe chete. Dzimwe nguva, mafashoni aya emataundi anogona kuratidzika semusvingo wakasimba.
Nzvimbo yekuchengetedza rusvingo inogona kusikwa mumitambo yakawanda uye maitiro uye inowanikwa munzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvizhinji zvevinyl fences zvakasvika mamita mana kusvika kumatanhatu uye zvinogona kusvika kusvika mamita masere kana kuvanzika kungave chinhu chikuru. iwe uchakwanisa kuwana danda roga roga mukati mekutenderera uye michero yekrisscross, uye iwe uchakwanisa kuwedzerwa kuwana tambo yakave yakagadzirwa nemasikirwo pamatunhu akareba.
Picket fences inonyanya kushandiswa nevanhu vanoda mapurisa ezvo sezvinofananidza huni. Nzira dzakawanda dzinowanikwa mumasvingo dzinosanganisira zvikwata kana matanda ari pakati penguva uye anoshamwaridzana nemiti yakareba. Aya masvingo haabvumi kuti verenganidzi vekuverengeka vakaverengwa vanowanzojaira kuchengeta mhuka nevechidiki mukati mekamuri. Aya mazhenje ane urefu hwakakwirira hwemakumbo mana uye akafupisa uye anogona kuonekwa kuburikidza nehutanda hwepachivande uye mumvuri-bhokisi rusvingo.
Sezvo masvingo aya asingatauri vega, ivo vakanyanyozivikanwa muganhu weimba. iwe uchakwanisa kuita kuti zvive zvakagadzirwa mumitambo yakasiyana-siyana sezvibatanidza zvipingamupinyi uye zvinyengeri. Aya mazhenje dzimwe nguva anoshandiswa kuminda. Vamwe vadzidzisi kuwedzera kuvashandisa kana vachida kubvumira zvakakwana kuverengwa kune vanofamba.
Shadow Box Masvingo
Kana iwe uchida kuisa munharaunda yega-privacy, iwe unofanira kusarudza mumvuri bhokisi. Aya masvingo ane mapapiro pane kupindira, izvo zvinobatana. tho 'havanze zvachose kutora kwavanozoona kuburikidza navo, vakagadzirirwa mukati mokutenda zvikuru kuti vakugadzire zvakasimba kune vanofamba kuti vaonekwe kuburikidza navo. Mumwe anofanirwa kumira pamakumbo akasiyana zvakakwana kuti aone kuburikidza navo uye awane kuverenga kwakanaka. iwe uchakwanisa kuwana mumvuri wemasvingo emasvingo akasiyana-siyana, zvisinei zvazvo vazhinji vavo vari kumativi akareba mamita gumi. Nyeredzi inowedzera kuumba fence inonyengedza uye yakaisvonaka.
Yakarongedza Vinyl Fences
Vinyl fencing ingasikwa pakurongeka mune zvishoma nezvamunofarira. Aya mazhenje atova anowanikwa kusarudzwa kukuru, zvisinei kuti ivo vanozogadzirirwa mumatanho nemanzwiro evatengi. iwe uchakwanisa kushandisa zvishandiso mamiriro akaita sepositi kaps uye masuo ekirasi kuti aite kuti vatarise kuwedzerwa kukuvadza. Vaiti vanogona kugadzira vinyl fence kutevedzera zvimwe zvinhu zvakadai sehuni, zviyo, granite, uye mabwe kana iwe uchida kuronga kwemashoko chaiwo ekudzivirira. Vanoshandisa mavara emashira uye mavara kuti vagadzire vinyl fencing vanowedzera zvimwe zvinhu zvekuvhara.
Kune zvidimbu zvevinyl fence dzinobatanidza zvikwangwani zvinoratidzira masvingo aya mune zvakanyanyisa zvigadziro uye mavara. Vanopisa masvingo uye vanoita kuti vatarise vane ruzivo uye vanoyevedza.
Nzira yei yokuisa Vinyl Fence?
Kana uri muri DIYer, chikamu ichi chakakosha zvikuru kwauri. iwe uchakwanisa kutevera matanho aya kuti uise mufini yevinyl asi sevanyori vanoita:
Gadzirira pasi uye ugare pasi
Danho rokutanga nderokuronga pasi apo pose paunofanira kuisa mufence. akadzikisa uye achenesa fenho uye anobvisa chero uswa, michero, miti, nemhando ipi zvayo yezvipingamupinyi zviri pasi. iwe uchakwanisa kubhadharira vaggers vanoita basa iri World Health Organisation inogona kusimbisa kuti hapana mitsetse ichaputsika nekuda kwekumba.
Zvadaro, unofanirwa kurarama nzvimbo yakagadzirirwa kuisa mufambo kuitira kuti iwe une chirongwa chezviyero zvakadini vinyl uzive waunoda kutengesa nzvimbo iyoyo chaiye.
Mark the Post Locations uye inotaridza Fencing Layout
Zvakakosha kuisa nzvimbo dzezvikamu kuitira kuti iwe uzive urefu hunopihwa pakati pemashure ose. Vinyl fences haigoni kutemwa, saka iwe unoda kuva wakarurama kwazvo nezviyero kana iwe ungazviwana uine kukanganisa kwakakosha. Isai zvinyorwa mukati mezvakakodzera nzvimbo musati mava mabowo munzvimbo idzodzo. izvi zvingaita kuti kuisa nzira yakanyanya nyore.
Ikozvino, chera masango emapuranga emipendero anoshandisa foshoro. Nzvimbo dzenzvimbo dzinofanira kuva dzakadzika zvakakwana kutakura masvingo zvakanaka. Kana iwe ukakwanisa kukwereta chikwata chako, zvichaita kuti basa rako rive nyore. iwe uchakwanisa kuchengetedza zvinyorwa zvisina kunaka konkeri uye marara. Isa imwe chinyorwa pane imwe nguva uye shandisa chirongo chekuchera zvakakosha konkrete kubva pamiganhu.
Zvadaro, iwe unofanira kuisa muzvikamu zvevinyl fence pakati pemakona. Nokuda kwechikonzero ichi, iwe unofanirwa kutevera mazano ekugadzira. Pamusoro pechikamu chimwe nechimwe, tora mabheji nemagetsi uye uchengetedze mairi mumapuranga ari pasi.
Isai kuvhara kwe Post
Kuti uite nhanho iyi, zvakare uchitevera mirayiridzi yemuiti. iwe uchakwanisa kuva nemapuranga ekuputika kuputika kuiswa kumativi ekumusoro emasvingo. Zvizhinji zvevinyl fences dzinosanganisira mafambiro uye maitiro ekugadzirwa kwemashure ekuputika ayo achangoshandiswa mukutambudzwa hardware inopiwa.
Kana iwe uchimhanya mune imwe nyaya muimwe yezviito izvi, uchakwanisa kuwana nyanzvi kuti ikubatsire kunze.